ILizwe elilumkileyo lokuFama Hlala ngaseAlpine Valley/Lake Geneva
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBente
Buyela kumava asemaphandleni azolileyo kule fama yonke, apho unokuhlala khona, uphumle, kwaye wonwabele umtsalane welizwe lendawo yakho yabucala ngaphakathi kwindlu enkulu yasefama.
Ukuba uyazikhethela ukuba usidibanise nemisebenzi yakusasa eshedini. Ukuba undixelele ngobusuku obungaphambili, ungazama ukusenga iKarmele, inkomo ngesandla, ukondla ihagu, ukuqokelela amaqanda kwihoko yenkukhu nokunye. Ezona zithandwa kakhulu ziikati ezinobuhlobo kunye nenja yasefama, uBindi, oya kuhlangana nawe njengoko uqhuba.
Le fama yendalo, ebizwa ngokuba yiFarmWise, isetyenziselwa iinjongo zokufundisa abantwana. Ukususela embindini kaJuni ukuya phakathi ku-Agasti sibamba isikolo sasefama esithatha iveki yonke sabantwana abancinci (farmwiseeducation.com). Injongo yethu kukunika abantwana amava ngezandla apho ukutya kwethu kuvela khona ngokwenza igadi, ukupheka kunye nokunyamekela izilwanyana kunye nabo bavunyelwe ukuthatha inxaxheba. Iiklasi ezininzi zesikolo namanye amaqela nazo ziza apha ebudeni bonyaka wesikolo. Ngoku sikwanikezela ngawe, zindwendwe zethu zasebusuku, ukuba nize nidibane nazo zonke izilwanyana zasefama kule meko incinci.
4.97 · Izimvo eziyi-163
IAlpine Valley Ski & Resort yindawo edumileyo yeSki, iGalufa kunye noMculo ukuze iindwendwe zibe namava. ILake Geneva inemisitho emininzi kunye nezinye iidolophu ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Bente
Ukuba undazise ngobusuku obungaphambili, ungaza eshedini uze udibane nazo zonke izilwanyana zasefama kusasa.
Nceda ujikeleze indlu uze usihlangabeze ngayo nayiphi na imeko!
Iilwimi: English, Deutsch, Norsk